Redmi K30 5G နဲ့ MIUI 12 Error များအကြောင်း — Anycall Mobile
By Naw Htoo Aung July 31, 2020 1 Min Read
Redmi K30 5G ဖုန်းတွေမှာ MIUI 12 System Update တင်ရင် ဖြစ်နေတဲ့ error လေးရှိတာတွေ့ဖူးကြလား? MIUI 12 လေး စောစောရလို့ တင်လိုက်မိပါတယ် error ပါလို့ စိတ်ညစ်နေရတယ် ဆိုတဲ ခံစားချက်ကြီက MIUI 12 ကိုမျှော်လင့်တကြီးစောင့်စားနေကြတဲ့ ဆိုတဲ့သူတွေအတွက် တော်တော်လေးကို ခံစားရခက်တဲ့အခြေအန တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတော့ K30 5G User လေးတွေ ခံစားနေရတဲ့ခံစားချက်တွေ သိုလော သိုလောတွေကို ဖြေရှင်းပေးဖို့အတွက်ဘယ် Version တွေမှာ ဖြစ်နေလဲ? ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ? စတဲ့အကြောင်းရာလေးတွေကို အောက်မှာရှင်းပြ ပေးထားပါတယ်နော်။
ဘယ်လို error တွေ ဖြစ်နေလဲ?
လက်ရှိ Redmi K30 5G ဖုန်းတွေမှာ MIUI 12 တင်လိုက်ရင် ဖြစ်နေတဲ့ error တွေကတော့ Game ကစားတဲ့အချိန် မဟုတ်ဘဲ ပုံမှန်သုံးနေချိန်မှာတောင် စက်က သိသိသာသာပူလာတာ၊ Game ဆော့နေချိန်မှာလည်း လိုင်းခဏခဏ လတ်တာ နဲ့ Game ဆော့နေချိန်မှာလည်း Screen အပြည့်မပေါ်တော့တာ စတဲ့ error တွေ ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။
ဘယ် Version တွေမှာ ဖြစ်နေလဲ?
Redmi K30 5G တွေမှာ error ဖြစ်နေတဲ့ Version လေးကတော့ MIUI 12.0.2 တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Redmi K30 4G တုန်းကလည်း MIUI 12.0.1 နဲ့ MIUI 12.0.2 မှာ အလားတူ error တွေ ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် လက်ရှိ MIUI 12.0.3 မှာတော့ အပေါ်က error တွေ မရှိတော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် Redmi K30 4G ကိုင်ထားတဲ့သူတွေအတွက် MIUI 12.0.3 က error ကင်းကင်းနဲ့ တင်နိုင်နေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖြေရှင်းဖို့ကတော့ MIUI Version ပြန်ဆင်းချင်ရင်ဆင်း ဒီလိုမှ မဟုတ်ရင်တော့ နောက်ထွက်လာမယ့် MIUI 12.0.3 Version ကို စောင့်ဖို့ပါပဲ။ Redmi K30 5G သမားတွေအတွက်ကတော့ MIUI 12.0.3 က မထွက်သေးတာမို့ လက်ရှိအချိန်ထိတော့ အဆင်မပြေနိုင်သေးပါဘူး။ နောက်ဆက်တွဲ အနေနဲ့ကတော့ Redmi K30 Pro တွေမှာလည်း MIUI 12 တင်ရင် SIM လိုင်းမတက်တဲ့ error လေးတွေ ရှိနေပါသေးတယ်။ နောက်လာမယ့် MIUI 12.0.3 ထွက်လာရင်တော့ ဒီ error တွေကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။
Apple Gift Card ဟာ iTunes Gift Card နဲ့ Apple Store gift Card တို့နဲ့ဘယ်အချက်တွေမှာကွာသွားသလဲ ?